SEA VIEW CONDO (Myeik) | iMyanmarHouse.com
SEA VIEW CONDO (Myeik)
Sea View Codo ၏အိမ်ခန်းများကို အနိမ့်ဆုံးဈေး သိန်း (၈၀၀) မှစတင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး
(180) ဒီဂရီ ပင်လယ်ပြင်မြင်ကွင်းကြည့်ရှုနိုင်သောအိမ်ခန်း
(၁၅) ခန်းသာ ကျန်ရှိပါတော့သည်။
လက်ဦးမှုရ ယူရန်သူ့ထက်ငါ ဦးရာလူ အရှိန် အဟုန်ဖြင့် ဝယ်ယူနေပါပြီ။
ကနဦးပေးငွေ - အရစ်ကျ
ကုမ္ပဏီ ၃ နှစ် - အရစ်ကျ
လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအတိုင်း - အရစ်ကျ
Sea View Condo Project မိတ်​ဆက်​ခြင်း
“ Sea View Condo ” စီမံကိန်းသည်​ ပင်​လယ်​ကမ်းရိုးတန်းမြို့့ မြိတ်​မြို့့၏ ကမ်းနားလမ်းတွင်​ တည်​ရှိပြီး Pyi Phyo Tun International Co.,Ltd နှင့်​ South Asia International Investment Group Pte Ltd ရင်းနှီးမြုပ်​နှံလုပ်​ငန်းစုတို့မှ ပူး​ပေါင်း​ဖော်​ထုတ်​၍ ​ဟောင်​​ကောင်​ ကုမ္ပဏီမှ ဒီဇိုင်းဆွဲ တည်​​ဆောက်​ထားပါသည်​။ဤစီမံကိန်းသည်​ ကမ်းနား​နေရာမှာ တည်​ရှိခြင်း၊ International advanced design concepts of planning ကို အသုးံပြုခြင်းနှင့် Eleganc​​e ဖြစ်​​သော art deco အ​ဆောက်​အဦးပုံစံကို ဒီဇိုင်း​ရေးဆွဲထားခြင်းတို့ဖြင့်​ မြန်​မာနိုင်​ငံ၏ ပထမဆုးံ​သော အဆင့်​မြင့်​ Sea View အိမ်​ရာ၊ လမ်း​လျောက်​​ဈေး၊ ကမ်းနားလမ်းပန်းခြံတို့​​ပေါင်းစပ်​ထားသည့်​ နိုင်​ငံတကာအဆင့်​အိမ်​ရာနှင့်​ ​ဈေးဆိုင်​ ဖွဲ့စည်းထာ​သော Projectကို ဖန်​တီးသွားမည်​ဖြစ်​ပါသည်​။
Condo အတွင်း၌ ​ရေကူးကန်​၊ အဆင့်​မြင့်​​ဘောလုးံကွင်း၊ လှပ​သော ​ရေပန်းဥယျာဉ်​၊ကြီးကျယ်​ခမ်းနား​သော အခမ်းအနား​ဆောင်​ရွက်​ရန်​​နေရာနှင့်​ အားကစားကိရိယာများစသည့်​ Facilities များထားရှိ၍ Video Door Phone စနစ်​၊ IC Card Entrance Guard စနစ်​နှင့်​ Infrared Electronic Monitoring စနစ်​တို့ဖြင့်​ ပိုင်​ရှင်​များအတွက်​ လုံခြုံ​သော ​နေထိုင်​မှုဘဝကို ဖန်​တီး​ပေးသွားမည်​ဖြစ်​ပါသည်​။Sea View Mall တွင်​​ ​ဈေးဝယ်​ခြင်း၊ စား​သောက်​ခြင်း၊ ​ဖျော်​​ဖြေ​ရေး၊ စီးပွား​ရေးအဖွံ့ဖြိုးဆုးံ​သော​နေရာနှင့်​ လည်​ပတ်​ရန်​အ​ကောင်းဆုးံ​သော​နေရာ ဖြစ်​ပါ၍ Customer များအား ​ပျော်​ရွှင်​ဖွယ်​​ကောင်း​သော ​ဈေးဝယ်​ခြင်း အ​တွေ့အကြုံကို သယ်​​ဆောင်​​ပေးနိူင်​ပါမည်​။Sea View Mall တွင်​​ ​ဈေးဝယ်​ခြင်း၊ စား​သောက်​ခြင်း၊ ​ဖျော်​​ဖြေ​ရေး၊ အပန်း​ဖြေခြင်း ​လေးမျိုးပါဝင်​ပြီး နိုင်​ငံတကာအဆင့်​ ​ခေတ်​မှီ​သော Shopping Mall ကို ​ဖော်​​ဆောင်​​ပေးသွားမည်​ဖြစ်​ပါ၍ မြိတ်​မြို့ အတွက်​ ပထမဦးဆုးံ​သော အဆင့်​မြင့်​လမ်း​လျှောက်​​ဈေးကို ဖန်တီး​ပေးသွားမည်​ဖြစ်​ပါသည်​။ဤ​နေရာမှာမြိတ်​မြို့ ၏ လူအများစု​ဝေးရန်​​နေရာ၊ စီးပွား​ရေးအဖွံ့ဖြိုးဆုးံ​သော​နေရာနှင့့့့်လည်​ပတ်​ရန်​အ​ကောင်းဆုးံ​သော​နေရာဖြစ်​ပါ၍ Customer များအား ​ပျော်​ရွှင်​ဖွယ်​​ကောင်း​သော ​ဈေးဝယ်​ခြင်း အ​တွေ့အကြုံကို သယ်​​ဆောင်​​ပေးနိူင်​ပါမည်​။လုပ်​ငန်းရှင်​များ၏ ရင်းနှီးမြုပ်​နှံမှုအတွက်​လည်း အကျိုးအမြတ်​​ကိုပြန်​လည်​ရရှိနိုင်​ပါမည်​။ထို့အပြင်​ ကမ်းနားလမ်းပန်းခြံသည်​လည်း မြိတ်​မြို့ သာမက မြန်​မာတစ်​နိုင်​ငံလုးံ၏ အပန်း​ဖြေရန်​ ပထမဦးဆုးံ ​ရွှေးချယ်​ရမည့်​​နေရာတစ်​ခုဖြစ်​ပြီး စီးပွား​ရေးယဉ်​​ကျေးမှုနှင် လူမှုဘဝယဉ်​​ကျေးမှုတို့ ​ကောင်းမွန်​စွာ ​ပေါင်းစပ်​ထား​သောအ​ခြေအ​နေကို အပြည့်​အဝခံစားရမည်​ဖြစ်​ပါသည်​။အရည်​အေ​သွး၊ ပြည့်​စုံခိုင်​မာ​သောပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကို Sea View Condo မှစတင်​လိုက်​ပါသည်​။
Phase (1) အိမ်​ခန်းစရံ ​ငွေ​ပေး​ချေခြင်း အစီအစဉ်​တွင်​ပါရှိ​သော အိမ်​ခန်းပုံစံ (၄)မျိုး
Sea View Condo လုပ်​ငန်း ပြီးစီးမှု အ​ခြေအ​နေ
ပထမဦးဆုးံ​သော ထူးခြားသည့်​ဝန်​​ဆောင်​မှု (၆)မျိုးပါဝင်​သည့်​
မြန်​မာနိုင်​ငံတွင်​ တစ်​ခုတည်း​သော အိမ်​ယာစီမံကိန်းအား ​ဖော်​​ဆောင်​ခြင်း။
၁။ မြန်​မာနိုင်​ငံ၌ ပထမဦးဆုးံ​ပင်​လယ်​ကိုမျက်​နှာမူ၍ တည်​​ဆောက်​ထား​သော ပင်​လယ်​ရှုခင်းအိမ်​ယာ စီမံကိန်းဖြစ်​ခြင်း။
၂။ မြန်​မာနိုင်​ငံ၌ ပထမဦးဆုးံ​သော ကွန်​ဒိုပိုင်​သီးသန့်​ပန်းခြံနှင့်​ ကမ်းနားပန်းခြံတို့ပါဝင်​ခြင်း။
၃။ မြန်​မာနိုင်​ငံ၌ ပထမဦးဆုးံ​သော ဥ​ရောပစတိုင်​ပင်​လယ်​ရှုခင်းစီးပွား​ရေးဗဟိုချက်​များအား ပိုင်​ဆိုင်​ထားခြင်း။
၄။ မြန်​မာနိုင်​ငံ၌ ပထမဆုးံ​သော တန်​ဖိုးသင့်​ရှုခင်းသာအိမ်​ယာစီမံကိန်းဖြစ်​ခြင်း။
၅။ တနသာင်္ရီတိုင်း​ဒေသကြီး၏ ပထမဦးဆုးံ​သော ကိုယ်​တိုင်​တံခါးပိတ်​/ဖွင့်​စနစ်​(The Gate-ban Monitoring System) အားထားရှိခြင်း။
၆။ တနသာင်္ရီတိုင်း​ဒေသကြီး၏ ပထမဦးဆုးံ​သော​ရေကူးကန်​၊ ​ဘောလုးံကွင်း၊ အခမ်းအနား​ဆောင်​ရွက်​ရန်​ ​နေရာ၊ အားကစားကိရိယာများ၊ Shopping center၊ Supermarket စသည့်​ Facilities များအား ထားရှိခြင်း။
Sea View Condo Project အားသာချက်​များ
​မြေ​အောက်​ရှိ​ ​ကျောက်​လွှာသို့ မီတာ ၅၀ Foundation ချ၍ အသုးံပြုမှုသက်​တမ်းမှာ အနှစ်​ ၁၀၀ ရှိပါသည်​။Refuge Floor ၊ Intelligent မီးသတ်​စနစ်​ ၊ လုံခြုံ​ရေးကင်​မရာစနစ်​တို့ ပါရှိခြင်းနှင့်​ ငလျှင်​ဒဏ်​၊ မုန်​တိုင်းဒဏ်​ခံနိုင်​အားတို့ကို အပြည့်​အစုံထားရှိခြင်း။
​အစိုးရ​ထောက်​ခံချက်​နှင့်​ Sea View Condo စု​ပေါင်းပိုင်​အ​ဆောက်​အအုံလုပ်​ငန်း လိုင်​စင်​တို့ပါရှိခြင်း။
​ကမ်းနားလမ်း၊ ​ရေကူးကန်​၊ ​ဘောလုးံကွင်း၊ ​ရေပန်းဥယျာဉ်​၊ ကားပါကင်​၊ တံခါးပိတ်​/ဖွင့်​စနစ်​၊ လုံခြုံ​ရေးကင်​မရာစနစ်​၊ အခမ်းအနား​ဆောင်​ရွက်​ရန်​​နေရာ၊ အားကစားကိရိယာများ၊ ၂၄နာရီ လုံခြုံ​ရေးဝန်​ထမ်းများဖြင့်​ ​စောင့်​ကြပ်​​ပေးခြင်း စသည်​တို့ကို ထားကိုထားရှိခြင်း။
​ပန်​ခြံဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်း၊ ပြတင်း​ပေါက်​ဖွင့်​လိုက်​သည်​နှင့်​ အခန်းကျယ်​ဝန်း၍ သက်​​တောင့်​သက်​သာရှိခြင်း၊ အိမ်​ခန်းဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး ပါရှိခြင်း၊ အခန်းကျယ်​ဝန်း၍ ဇိမ်​ရှိခြင်း၊ ​လေ​ကောင်း​လေသန့်​ရရှိနိုင်​ခြင်း၊ ​နေ​ရောင်​ခြည်​အပြည့်​အဝ ရရှိနိုင်​ခြင်း။
HOTLINE : 09796546666
FACEBOOK : sea view condo
WEBSITE : www.sea-view-condo.com
PROJECT ADDRESS : Near Shopping Center, Kannar Road, Myeik
PROJECT NAME : SEA VIEW CONDO
DEVELOPERS : PYI PHYO TUN INTERNATIONAL CO,LTD.
SOUTH ASIA INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP PTE LTD.
THE YANGTZE RIVER INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP CO.,LTD
CONTRACTOR & DESIGN : HONG KONG FUTURE GROUP CO,LTD.
ZHUOCHUANG INTERNATIONAL ENGINEERING DESIGN CO,LTD.